နိုက်ကလပ်မှအပြုအမူများအတွက် ကစားသမားများကို အမ်မရီသတိပေးမည်၊ ဟိုးလ်ဒင်း၏ဒဏ်ရာပြဿနာရှိေ?? - Yangon Media Group
အာဆင်နယ်ကစားသမားအ ချို့သည် ဘောလုံးရာသီမစတင်မီ က လန်ဒန်ရှိနိုက်ကလပ်တစ်ခုအ တွင်း မူးယစ်စေတတ်သော အငွေ့ များရှူရှိုက်ခဲ့ကြသည်ကို ဗြိတိန်ွှ့နှကည သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ ပြီးနောက် ယင်းအချိန်က ပါဝင်ခဲ့ ကြသောကစားသမားများအား နည်းပြအမ်မရီက တွေ့ဆုံသတိ ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အနောက်လန်ဒန်ရှိ လူကုံထံ များသာသွားရောက်လေ့ရှိသော အနောက်လန်ဒန်ရှိ နိုက်ကလပ် တစ်ခုတွင် အာဆင်နယ်ကစားသ မားများဖြစ်သော အူဘာမီယန်၊ လာကာဇက်တီ၊ အိုဇေးလ်၊ ကိုလာ စီနက်နှင့် ဂွမ်ဒူဇီတို့မှာ ရယ်မော စေတတ်သော နိုက်ထရပ်အောက် ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များကို ပူဖောင်းအ တွင်းမှ ရှူရှိုက်နေခဲ့ကြသော အ ထောက်အထားများကွှို့နှကည သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
နိုက်ထရပ်အောက်ဆိုက်မှာ ဗြိတိန်တွင် ဥပဒေအရ တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးထားသော်လည်း ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူး ခြင်းများမပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ထား ပြီး အဆိုပါအငွေ့ကိုရှူရှိုက်ပါက ရယ်မောစေနိုင်သဖြင့်ူကေါ့ငညါ-ျါေ ဟုလည်း ခေါ်ဆိုသည်။
အာဆင်နယ်ကစားသမား များ၏ အဆိုပါပါတီပွဲမှာ ရာသီ သစ်မစတင်မီ သြဂုတ်လအတွင်း ကလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အ သင်းအနေဖြင့် လက်ရှိတွင် ရလဒ် များကောင်းမွန်နေရာ နည်းပြအမ် မရီအနေဖြင့် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြ သောကစားသမားများကို ပြင်းထန် သောအရေးယူမှုပြုလုပ်ဖွယ်မရှိ သော်လည်း ¤င်းတို့၏အပြုအမူ များမှာ အသင်းကိုကိုယ်စားပြု သည်ကို တွေ့ဆုံသတိပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း အာဆင်နယ်အ သင်းကကြေညာခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် အာ ဆင်နယ်နောက်ခံလူဟိုးလ်ဒင်း သည် မန်ယူနှင့်ပွဲတွင်ရရှိခဲ့သော ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် ရာသီကုန်အထိ အနားယူရမည်ဖြစ်ရာ ခံစစ်ပိုင်း၌ အားနည်းမှုများရှိနေသော်လည်း နည်းပြအမ်မရီအနေဖြင့် ဖူလ်ဟမ် သို့အငှားချထားသော ချမ်ဘာကို ပြန်လည်ခေါ်ယူခွင့်ရှိမည်မဟုတ် ကြောင်း သိရသည်။
ချမ်ဘာသည် အဆိုပါဒဏ် ရာကြောင့် ခြောက်လမှ ကိုးလအ တွင်းအနားယူရဖွယ်ရှိနေရာ ယခု နှစ်ရာသီအတွင်း ပြန်ကစားနိုင် ဖွယ်မရှိတော့ချိန်တွင် ကော့စီရယ် နီမှာ ဒဏ်ရာမှပြန်လည်သက်သာ စဖြစ်ခြင်း၊ မွန်ရီရယ်နှင့် ကွန်စတန် တီနော့စ်တို့မှာ ဒဏ်ရာပြဿနာ များရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ကြံ့ခိုင်မှု အပြည့်ရှိနေသောဗဟိုခံစစ်မှူးအ ဖြစ် မူစတာဖီနှင့် ဆိုကရာတစ်တို့ သာရှိနေသည်။
သို့ဖြစ်ရာ ခံစစ်အားနည်းမှု ကိုဖြေရှင်းရန် ဖူလ်ဟမ်သို့အငှားချ ထားသောချမ်ဘာကို ပြန်လည် ခေါ်ယူဖွယ်ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းမှု များရှိခဲ့သော်လည်း ဖူလ်ဟမ်နှင့် ချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်အတွင်း အငှားသက်တမ်းမကုန်မီ ကစား သမားကိုပြန်ခေါ်နိုင်မည့်အချက် ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
၂ဝ၁၇ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေ တစ်သက်တာဆု၊ အမျိုးသားစာပေဆုနှင့် စာပေဗိမာန်ဆုရရှိသူများကု??
တောင်ကိုရီးယား အတိုက်အခံပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ကေဆောင် စက်မှုဇုန်သို့ သွားရောက်မည်
စိုက်ပျိုးမြေများ ရေတိုက်စား ခံခဲ့ရသောကြောင့် မတ္တရာမှ တောင်သူများ တစ်ရွာလုံး နှီးခမောက် လ??